Nahoana Ireo Vondrom-piarahamonina Teratany Ao Meksika No Mila Fiarovan-tena Ho An’ny Vondrom-piarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Septambra 2015 5:07 GMT
Nampibaribary ny olana goavana eo amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona atao amin'ireo vondrona teratany ireo zava-niseho vao haingana tao Meksika. Niseho tao Santa María de Ostula, Michoacán state, ny tranga vao haingana indrindra tamin'izany, izay nitarainan'ny vondrom-piarahamonina teratany eo an-toerana ho notafihan'ny miaramila Meksikana.
Tsy vitsy any Amerika Latina akory ny fisian'ireo polisin'ny vondrom-piarahamonina. Sampam-piarovana manana ny fandaminany manokana izay azy samirery, miaraka amin'ny fomba fitantànany manokana, miasa miankina amin'ireo filàn'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana ireny vondrona ireny.
Araka ny fitakiana natao tety anaty aterineto izay mitaky ny hanafahana an'i Semeí Verdía Cepeda, ny kaomandàn'ny polisin'ny vondrom-piarahamonina voasambotra taorian'ny zava-nitranga vao haingana tao Santa María de Ostula, fanjakana Michoacán:
Tsy voalohany izao no nampangaina ho nanao fanararaotam-pahefana sy hery tafahoatra ny miaramilan'i Meksika, na koa hetsika voaheloky ny lalàna, indrindra hatramin'ny taona 2006 nanomezana andraikitra azy ireo hiantoka ny fiarovana ny vahoaka.
Miresaka izany indrindra ity lahatsoratra manaraka ity, avy amin'ilay Meksikana mpanao saritatra, Helio Flores, izay mivezivezy any amin'ny Twitter any:
Antony iray, farahafaratsiny ampahany, amin'ny fanapahan-kevitry ny vahoaka ao Cherán, Michoacán mba hanomboka handrindra tena samirery tsy miankina amin'ny fanjakana, ary hiditra amin'ny fiarovan-tena, ny tsy fahampian'ny fahatokisana ny andrim-panjakana ao amin'ny fiarovana . Nahatonga aingam-panahy tamin'ireo vondrom-piarahamonina teratany hafa mba hanaraka ny dian'ny Cherán ihany koa ny antony mitovy amin'izany.
Ny vahoaka Zoque an'ny San Miguel Chimalapa, fanjakana Oaxaca, no iray amin'izany vondrom-piarahamonina izany, izay nampiasa ny bilaoginy amin'ny aterineto mba handàvana ireo manampahefana kaominaly sy ireo antoko politika misy eo amin'ny faritra, ary nanambara ny fananganana Kaomitin'ny Vondrom-piarahamonina izay manana tanjona ny hiaro ny faritra voazara ary ireo vokatra natoraly azo ampiasaina:
Misy ohatra maro mifandraika amin'io Mandatehezan'ny Vahoaka Teratany io, tafiditra amin'izany ny Otomí an'ny San Francisco Xochicuautla any amin'ny fanjakan'i Meksika, izay manohitra ny tetikasa fanamboarana làlana ho an'olon-tsotra manokana, izay hanimba ny ala sy ireo tany izay azy ireo; miady ny hiarovana ny tany masina amin'ireo tetikasa goavana be fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ny Huichol an'ny Wirikuta, ary ny Yaqui tribe an'ny Sonora, izay manompana ireo ezaka ataony amin'ny fanoherana ny fanamboarana ny lakandrano Independencia noho ny raho-mitatao apetrak'io amin'ny fambolena sy ny fiainan'ny vondrom-piarahamonina.